I-Horoscope yamaviki onke: Okthoba 3 kuya ku-Okthoba 9, 2021 - Ukuzijabulisa
I-Horoscope yamaviki onke: Okthoba 3 kuya ku-Okthoba 9, 2021
Nakhu izinkanyezi ezikubekele leli sonto.
Kuleli sonto yakha isiko elibiza ukuthula, uthando nokuzwana; engeza izimbali nomculo, futhi ukhulise umuzwa ukuze uphile manje. Ukusetshenziswa kweholide kuqala ekuqaleni konyaka, ngakho-ke ungabanjwa isikhathi. Yenza isabelomali sakho, futhi ulungele ukunamathela kuso ezinyangeni ezizayo. Cabanga ngokuhlangenwe nakho nemibono ekhunjulwayo ye-track-the-beat kunokuba ucindezeleke.
Qhubeka ufunde ukuthola ukuthi yini egcinelwe isibonakaliso sakho phakathi nesonto lika-Okthoba 3 kuya ku-Okthoba 9, 2021.
Mashi 21 – Ephreli 19
Uyini umbono wakho maqondana nobudlelwano? Njengoba umjikelezo wonyaka uphela kanti omunye uhlwanyelwa maphakathi nesonto, bhala izinhloso zakho zokubambisana okulinganayo, ukubambisana, nobungane bomuntu ngamunye. Yini ofuna ukuyizwa nokuyiveza ngobunye? Qiniseka ukuthi kuhamba ngazo zombili izindlela ngokulingana nokunikezwayo. Kusukela ngoLwesine, umuntu onama-vibe aphesheya angavela ku-radar yakho. Isici esibanzi, umuzwa wenkululeko, kanye nokuzidela konke kusemenyu. Jabulela isiko lokungena ngokudla, ifilimu, noma isifundo.
yini engingayenza ukuze izinwele zami zikhule
Ephreli 20 – Meyi 20
Indawo yakho yomsebenzi neheath zivuthiwe ukuboniswa maphakathi nesonto, ngakho-ke gxila kubhalansi, ukuvumelana, nokulingana. Imvelo yakho kumele isekele ubudlelwano futhi uzizwe ulula, ukhanya futhi muhle. Kulungile ukwengeza ukuthambekela okuncane ngokuthanda kwakho isiko, hlanganisa uphinde uqondane ukuze wakhe isimo sesimanje esingapheli. Bhala uhlu lwalokho okufunayo ngokuya ngomsebenzi, imvelo, kanye nokufeza okuthile ngonyaka olandelayo, bese udedela noma yini ongafuni ukuyenza kumjikelezo olandelayo. Izinto ziyashisa endaweni yakho yezocansi nemfihlakalo, ngakho-ke landela izinkomba, bese ukhetha ku-vibe uma othile ekubeka lapho.
Meyi 21 – Juni 21
Maphakathi nesonto kuhle ukubonakalisa noma okungenani ukutshala imbewu yalokho ofuna ukukwenza ngobuciko, ukuzijabulisa nothando. Bhala izinhloso zakho bese wenza isiko lokuzibeka kulo mzuzu wamanje. Landela isenzo isonto lonke.
Indawo yakho yobudlelwano iyafudumala njengoba ukuhlangana komuntu ngamunye nobudlelwano kukulethela injabulo eyengeziwe nokukhuthaza kobuhlakani ezinyangeni ezimbalwa ezizayo. Umuntu othile omuhle angangena empilweni yakho, noma mhlawumbe uwena ozizwa senhlalo futhi wenza izinsuku zekhofi. Kwenze — inkathi ngayinye inesizathu, futhi ngayinye ihlukile kumjikelezo wakho.
Juni 22 – Julayi 22
Thatha izinsuku ezimbalwa zokuthula ukuqala kuleli sonto bese uvumelana nemizwa yakho yangaphakathi. Ukugeza okude okufudumele, amakhandlela, nomculo kungasiza. Cwila ekhaya lakho, emzimbeni wakho, emndenini wakho, bese ucabanga ngonyaka wokugcina wokuhlala esikhaleni sakho. NgoLwesithathu wusuku lokucabanga nokubhala lokho ohlose ukukuveza onyakeni ozayo kule ndawo. Dweba ibhodi lokubuka noma uthole enye indlela yokudala yokugxila ezinhlelweni zakho futhi uyixhumanise ne-subconscious yakho ngakho-ke nayo igibele! Qhubeka nokugeza okude nezikhathi zokuncoma ngenyanga ezayo; kukufanele.
Julayi 23 - Agasti 22
Khipha izeluleko zakho ezinemibala, Leo; NgoLwesithathu kusetshenziswe kahle ukudala uhlu noma ibhodi yokubuka. Yehla kumodi yephupho bese ubona unyaka wakho ozayo maqondana nokutadisha, izingane zakini, nemvelo yangakini. Zibophezele ekuthuthukiseni ulwazi lwakho, noma mhlawumbe yisikhathi sokurekhoda nokulayisha ubuhlakani bakho? Indawo yakho yezothando iphakamisa ukuthi sekuyisikhathi sokuzijabulisa okuthile, uzame izinto ezintsha, noma ubuyise inhlansi ngokusebenza ndawonye.
Agasti 23 – Septhemba 22
Umkhakha wakho wemali nezinsizakusebenza uyisisekelo esihle sokukhombisa lokhu ngoLwesithathu, ngakho-ke thatha ithuba lokuhlela kancane.
Cabanga ngeholo lakho, ukonga, ukutshala imali, nokusebenzisa imali ngonyaka odlule ukuhlinzeka ngomongo wamamaki ezinyanga eziyisithupha nambili, ngokulandelana. Ukuzibekela imigomo kungenzeka kukufinyelele lapho uya khona ngezikhathi ezinhle kakhulu, futhi ikakhulukazi kulo mnyango. Faka eminye imilingo ngokuthi yini-uma, futhi ungakhulumi phansi; igebe lokudala limayelana nokuthepha okungaba khona. Bhala izinhloso zakho bese uzifaka ebhodini ukuze uthole ugqozi unyaka wonke.
Septhemba 23 – Okthoba 23
Yenza utshalomali oluqinile kuwe ngokwakho ngokusetha izinhloso maphakathi nesonto kanye neseshini yesiko. Dala isimo esihle futhi esihle; engeza izimbali nanoma yini yobuhle — mhlawumbe isitsha esincane semikhono oyithandayo ongayinikela koNkulunkulu. Cabanga ngonyaka odlule bese ubheke phambili onyakeni ozayo; ngeso lengqondo ukuthi ufuna kwenzeke kanjani lokho. Lesi yisikhathi sokucabanga ngaphandle kwebhokisi, noma uzinze njengoba ehamba uma unelisekile ngeqiniso lakho njengamanje. Bhala izinhloso zakho, mhlawumbe uzidwebe bese ugxila ekuqondisweni kwakho, ekuzivezeni kwakho nasenhlosweni yakho.
Okthoba 24 - Novemba 21
Dweba ukwazi kwakho ngaphakathi kuleli sonto, Scorpio; ithule ngamandla futhi isetshenziswe kahle kakhulu ngesikhathi esithile saphakathi nesonto esizinikele. Gxila ekubekeni izinhloso ezungeze umkhuba wakho wokomoya futhi uhlole okukhanyayo. Zibophezele kwiphephancwadi lamaphupho noma uphuphe isinyathelo ngasinye ngesinyathelo, lapho lokho kukukhanga. Ukuthola ukuthula nokwakha indawo engcwele ekhaya lakho, engadini, noma esimweni semvelo kubalulekile; thola leyo ndawo, bese ubhala noma ubeke umbono ezinhlosweni zakho. Jova ukuzithuthukisa, bese uletha lolo thando emsebenzini wakho, ulondoloze, futhi usebenzise imali ukudala impendulo enhle.
Novemba 22 - Disemba 21
Cabanga ngesimo sakho senhlalo kanye nontanga ozwe ukuvumelana nakho kulo nyaka. Thuthukisa umuzwa wokuqukethwe nokuqhubeka okuzungezile ukusetha izinhloso zakho kokuthi kusuka kuphi lapha. Bhala lokho ofuna ukukuhlakulela nokuthi uzibona kuphi wena nalabo budlelwano kumamaki ezinyanga eziyi-6 ne-12. Yizwa umuzwa, futhi usondele ngokubonga ngokwenzekile nalokho okubizayo, kube sengathi sekuvele kukhona lapha. Ngenyanga ezayo, isibhamu sasekhanda, kanye nokuvuselelwa ekubukekeni nasekubukekeni kwakho konke kuyathandwa. I-charm factor yakho iyakhula ngalesi sikhathi, ngakho-ke jabulela lesi sikhathi senhlalo.
Disemba 22 – Januwari 19
Setha izinhloso zakho ngomsebenzi wakho kanye nesithombe somphakathi, ikakhulukazi ubudlelwano lezi ezakhelwe kubo. Imvelo ibalulekile — iyingxenye yempilo yakho kunokuba yehluke kuyo. Bheka emuva onyakeni odlule bese ubungaza okwedlule, uyeke ngokubonga, futhi ubheke phambili ngokuzethemba. Bhala uhlu lwezinhloso eziyi-10 ezizwakalayo, bese uthatha okungenani isinyathelo esisodwa ngaphambi kokuba kuphume isonto. Uthando lwakho lokufunda zonke izinto ngamasiko lungenziwa kangcono ngenyanga ezayo ngokusebenzisa itiyetha, ukufunda ngezifundo, kujulisa ukuqonda kwakho ngedokhumentari, noma nokubuka amafilimu angaphandle.
Januwari 20 – Februwari 18
Leli sonto yisikhathi esiyinhloko sokubonisa izinhloso nokuhlela ukuthi kuzokwakhiwa kanjani isisekelo sakho solwazi esizobukeka futhi sizwakale. Yini ofuna ukuyifeza, onayo, futhi mhlawumbe oyifundisayo, ngomsebenzi wakho noma ngethonya lakho jikelele? Cabanga ngokuhlangenwe nakho okubanzi okushukumisa ingqondo yakho, bese ubhala uhlu lwezinhloso maphakathi nesonto. Thatha izinyathelo ukuze ibhola ligingqike futhi ulisuse emibonweni esekhanda lakho liye ngokoqobo lwezinto ezibonakalayo. Indawo yakho yomphakathi iyafudumala ngenyanga ezayo; hlanganisa, wamukele izimemo, bese uthumela ezakho ezimbalwa.
Februwari 19 – Mashi 20
Leli isonto elivezayo, ngakho-ke hlwanyela imbewu yakho yenhloso ngokubhala uhlu, indaba emfushane, noma izinkondlo ezungeze okufunayo ngokuxhumeka okujulile nokusondelene. Hlakulela lowo mqondo wokuba ngowakho, ukwethembana, ukusondelana, nokuhlangana nomunye umqondo womuntu omuhle, umzimba nomphefumulo. Cabanga ukuthi umngcele ukuphi kulokhu, kufaka phakathi ezezimali, futhi uhlale uthembekile kulokho okuzwakala kukufanele. Hlonipha imizwa yakho kanye nokujula kwesisu, hlakulela umuzwa onika amandla wokuvumelana kwangaphakathi nokuchichima. Thambekela kule ngxenye yakho njengensimu ukuze ugcine ibhalansi.
UVanessa Montgomery — a.k.a. I-Astro All-Starz — isazi sezinkanyezi eselulekwa ngokomsebenzi futhi singumbhali we I-Star Power: Umhlahlandlela Olula Wokufundwa Kwezinkanyezi kwe-Modern Mystic futhi Amandla eCosmic: Khanyisa Ukukhanya Kwakho, Umhlahlandlela Olula Wezimpawu Zelanga ngelanga le-Mystic Yesimanje . Ehlose ukukhanyiselwa nokubona amalebuli adlule kubunye obusihlanganisa sonke, umsebenzi kaMontgomery nawo usiza ukuzulazula ezintweni ezibalulekile nge-cosmic intel. Isiqubulo sakhe: Khulula ingqondo yakho, uphathe amandla akho, dala umhlaba wakho.
ama-movie wemfihlakalo yomndeni ku-netflix
uyini uwoyela omuhle kakhulu wesikhumba
isisombululo esijwayelekile se-aha 30% + bha 2%
izindebe zezindebe ngaphambi nangemva